Plus Size Vintage Dress Black Overall - Buddhatrends
Vintage Grey / M Vintage Grey / L Vintage Grey / XL Vintage Grey / 2XL Vintage Grey / 3XL Vintage Grey / 4XL Vintage Grey / 5XL Jet Black / M Jet Black / L Jet Black / XL Jet Black / 2XL Jet Black / 3XL Jet Black / 4XL Jet Black / 5XL Kafe Brown / M Coffee Brown / L Kafe Brown / XL Kafe Brown / 2XL Kafe Brown / 3XL Kafe Brown / 4XL Kafe Brown / 5XL
Ity akanjo maotina venty ankapobeny amin'ny fehin-kibo eo amin'ny anoloana dia akanjo maivana tsotra izay azo mora ampiarahana amin'ny zava-drehetra. Miorina eo amin'ny ampahany ambony izy ary manohitra ny fiparitahan'ny onja tsara manjohy mankany amin'ny tapany midadasika midina, dia mitovy amin'ny ampahany miavaka amin'ny vanim-potoana sy fahasoavana.
Hahita ny hatsikana sy ny fampiharana, ireo paosy madinika ao amin'ny faritra fihantsiana. Manomboha amin'ny alalan'ny fampiasanao akanjo fampiasa isan'andro amin'ny fanaovana akanjo mavo eo ambany beige, na angamba loko menamena izay "hikolokolo" fotsiny ary hampiana menaka ho an'ny kitapo iray manontolo. Miankina amin'ny zavatra tadiavinao, ahafahanao mamorom-bolo mahafinaritra, manjopiaka sy mendri-kaja, brôtôlôjia ary ho tapakila farany ahazoanao ny lokanao tianao indrindra. Ho mora ny mahita fomba iray ahafahanao mifangaro amin'ny akanjo hafa ary mamorona ny tsikinao manokana, dia hahita ny halehibeo tsara ianao satria sambatra tokoa fa tonga amin'ny loko isan-karazany izy ireo avy amin'ny mahazatra ho an'ny hafa.